बालिका सडकमा भासिएकि पनि होइनन्, यो फोटो एडिट गरिएको होइन, इन्टरनेटमा भाईरल भएको फोटोको के हो वास्तविकता ? – Khabar Patrika Np
बालिका सडकमा भासिएकि पनि होइनन्, यो फोटो एडिट गरिएको होइन, इन्टरनेटमा भाईरल भएको फोटोको के हो वास्तविकता ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, आषाढ २६, २०७८ समय: १८:२०:४६
एजेन्सी । इन्टरनेटको संसारमा हनौठा चीजहरु भाइरल हुन समय लाग्दैन । यस्तै एक तस्वीर अहिले भाइरल भइरहेको छ । यो फोटो झट्ट हेर्दा बालिकाको आधा शरीर कंक्रिटको सडकमा भासिएको जस्तो लाग्छ । तर, यसको वास्तविकता अर्कै छ । यो फोटो अमेरिकाकी एक महिलाले सामाजिक संजालमा पोस्ट गरेकी हुन् ।
भाइरल भइरहेको यो फोटो देखेर सामाजिक संजालमा प्रयोगकर्ताहरु निकै अल्मलिइरहेका छन् र नयाँ नयाँ तर्क दिएर यो कसरी भयो भन्ने बताइरहेका छन् । यो फोटोमा भएकी बालिका फोटो सामाजिक संजालमा पोस्ट गर्ने महिलाकी छोरी हुन् ।
यो फोटो यही मे महिनाको सुरुवातमा सामाजिक संजाल रेडिटमा पोस्ट गरिएको थियो । फोटोमा गुलाबी कपडा लगाएकी एक बालिका फोनमा केही गरिरहेकी देखिन्छिन् । बालिकाको आधा शरीर कंक्रिटको सडकमा भासिएको देखिन्छ ।
महिलाले यो फोटो सामाजिक संजालमा पोस्ट गर्दै प्रयोगकर्तालाई उनकी छोरीको शरीरको आधा भाग कहाँ छ भनेर सोधेकी छिन् । प्रयोग कर्ताहरुले पनि यो फोटो दृष्टि भ्रम हो वा यो फोटो खिच्न कुनै अनौठो प्रविधि अपनाइयो भन्ने जान्न उत्सुकता देखाइरहेका छन् ।